September 2015 | OKKALA STORE
ချမ်းချမ်း ( ဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ် - MTV အသစ်လေးပါ ♥♥♥...
မန်ယူ 3-0 ဆန်းဒါးလန်း All Goals & Highlights [26...
Fantastic Four (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
အလွမ်းနဲ့တမ်းချင်း Mp3 Lyrics Album
Dragon Nest ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
ကျွန်မက အင်္ဂလိပ်မှ မဟုတ်တာ မောင်(အကြည်တော်)
ရေမီး အစုံ ( မြင့်မြတ် + စိုးမြတ်သူဇာ + ဒိန်းဒေါင်...
6 Way To Die (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Gallows (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Miss Jewel Princess သရဖူ မယ်လေး ခင်မေခ ♥♥♥
ပဲခူး သူလေးလို့ပြောတာပဲ ...သဘောပေါက်သူများ ကြည့်ချ...
စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Gandamar Wholesale ...
EVERLY - မြန်မာစာတန်းထိုး
Miss Universe မြန်မာ ရေကူးဝတ်စုံ အလှမယ်လေးများ ( A...
Miss Myanmar International 2015 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ဖိ...
ချောကလက် ထောင်ချောက် ( နေတိုး + နန်းဆုဦး ) မြန်မာ...
O.T. Ghost Overtime (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Novotel Yangon Max ...
Monkey King: Hero Is Back (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) မြန်မာစာ...
အလုံးစုံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသော ချစ်စရာ မြန်မာ Girls...
၀ဲလက်ရင်၏ တနေရာ ( အောင်ရဲလင်း + အိန္ဒြာကျော်ဇင် )ြ...
Girl House (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး (18+)
ချမ်းချမ်း ( ဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ် - MTV အသစ်လေးပါ ♥♥♥♥ )
Posted by okkala net at 5:09 AM No comments: Links to this post
မန်ယူ 3-0 ဆန်းဒါးလန်း All Goals & Highlights [26.9.2015]
စပါး ၄ - ၁ မန်စီးတီး VIDEO လက်စတာစီးတီး ၂ - ၅ အာစင်နယ် လီဗာပူး ၃ - ၂ အက်စတွန်ဗီလာ ( စတား၇စ် ခြေစွမ်းပြ ခဲ့တဲ့ပွဲ )
Posted by okkala net at 11:48 PM No comments: Links to this post
Review ကိုတော့ အရင် FF ကားတွေကိုကြည့်ပီးတဲ့သူတိုင်းသိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးလိုတော့ပါ
Fantastic Four ဇာတ်လမ်းကို Stan Lee က ဖန်တီးရေးသားခဲ့ပြီး ရေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ အဲ့ဒီအချိန်မှာ DC က Justice League of America ဆိုပြီး Superhero အဖွဲ့ ကိုစတင်မိတ်ဆက် နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Stan Lee က Marvel ရဲ့ ပထမဆုံး စူပါဟီးရိုး အသင်းကို ဖန်တီးဖို့ အတွက် စီစဉ်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက DC လို လိုက်ပြီး မလုပ်ချင်တာရယ်၊ သူ့ရဲ့ Superhero အဖွဲ့ကို တမူထူးခြားအောင် လုပ်ဖို့စီစဉ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Stan က သူ့ရဲ့ အဖွဲ့ကို Secret Identity လည်း မရှိစေချင်သလို ကာတွန်းထဲမှာပါမယ့် Superhero ရဲ့ ချစ်သူ ကို အားနွဲ့တဲ့ မိန်းကလေး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ Superman နဲ့ Lois Lane လို မဖြစ်စေချင်တာပါ။ Lois က Superman က Clark Kent ဆိုတာမသိသလို သူမကို တစ်ချိန်လုံး ကယ်တင်နေရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Stan က သူ့ရဲ့ အဖွဲ့ကို လုံးဝ Secret ID မရှိစေပဲ လူသိရှင်ကြား ကြေငြာထားသလို၊ Reed နဲ့ Sue ကလည်း အဖွဲ့သားတွေလည်းဖြစ် ချစ်သူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း ဘာလုပ်လည်းဆိုတာလည်း သိသလို Sue Storm (Invisible Woman) က သူတို့အဖွဲ့မှာ အရေးပါတဲ့ member တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သာမန် sidekick မထည့်တော့ပဲ လူငယ် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် Johnny Storm (Human Torch) ကို ထည့်ပေးလိုက်ပြီး Sue ရဲ့ မောင်အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုတော့ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေထက် ပိုထူးခြားအောင် လုပ်ချင်တာကြောင့် Ben Grimm ကို Rock Monster အဖြစ် လုပ်ဖန်တီးလိုက်ပြီး The Thing လို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ Fantastic Four ဖြစ်လာပြီး သူတို့အဖွဲ့ကို ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် Nov 1961 မှာ Fantastic Four issue #1 မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကာတွန်းစာအုပ် တွေစတင်ထွက်လာပါတယ်။ ကာတွန်းထဲမှာတော့ သူတို့ Reed Richards က လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ Marvel Universe ရဲ့ ဥာဏ်အကောင်း သုံးယောက်ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါဝင်ဖြစ်လာပါတယ်။ Comic ထဲမှာ Reed Richard အစိုးရ ရဲ့ လကမ္ဘာထက် ပိုဝေးတဲ့ ဂြိုလ်တွေစီသွားမယ့် အစီအစဉ်မှာ အလုပ် လုပ်နေရင်းပြီး Rocket လည်း ဆောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရက ငွေထောက်ပံ့နေတာ ရပ်တော့မှာဖြစ်လို့ သူကိုယ်တိုင် Rocket နဲ့ သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ Reed က သူ့ချစ်သူ Sue Storm ကို လိုက်ပါဖို့ခေါ်ခဲ့ပြီး Sue ရဲ့ မောင်လေး Johnny ကလည်း သူ့အမကို စိတ်မချလို့ မရမက လိုက်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Rocket ကို Pilot လုပ်ဖို့ အတွက် သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သူ တစ်ချိန်က လေတပ်ရဲ့ Test Pilot ဖြစ်တဲ့ Ben Grimm ကို အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့လေးယောက် Rocket ကို အစောင့်တွေအလစ်မှာ ခိုးဝင်ပြီး အာကာသထဲကို အောင်မြင်စွာ ထွက်လာ နိုင်ခဲ့ပေမယ့် လမ်းမှာ အမှတ်မထင် ပဲ Space Storm တိုက်ခတ်ခြင်းခံရပြီး ဒီ ကနေသူတို့ တွေ ရှေ့မဆက်နိုင်တော့ပဲ ကမ္ဘာပေါ်ကို ပြန်ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒီမှာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ကို လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေ ပြောင်းလဲလာကို တွေ့ရပြီး သူတို့ ရဲ့ ပါဝါတွေကို ထိမ်းချုပ်နိုင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့ စွမ်းအားကိုသုံးပြီး အဖွဲ့ အနေနဲ့ လူတွေကို ကယ်တင်မယ်လို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ စွမ်းအားတွေက အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း Reed Richards က ရာဘာလိုပဲ ကိုယ်ခန္ဓာကို လိုသလို ဆန့်ထွက်လို့ရသလို၊ Ben Grimm က Rock Monster ဖြစ်သွားပါတယ်။ Johnny ရဲ့ ကိုယ်က မီးတောက် တွေထုတ်လို့ရသလို၊ Sue က ကိုယ်ဖျောက်စွမ်းအားရှိပါတယ်။ Johnny က Human Torch, Sue က Invisible Girl (နောက်ပိုင်းမှာ Invisible Woman), Ben Grimm က The Thing လို့ စူပါဟီးရိုးနာမည် ယူကြပြီး Reed Richard က Mr.Fantastic လို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို နာမည်တွင်ရတာ သူရဲ့ ပါဝါကြောင့် မဟုတ်ပဲ သူက အရမ်းတော်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ တုန်း ထွက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်မှာပါတဲ့ Baxter Building လို့ခေါ်တဲ့အထပ်မြင့် တိုက်က သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ Fantastic Four Car ကိုတော့ 2007 ဒုတိယမြောက်ကားမှာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Reed Richard က Unstable Molecules ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး ဒီ Molecules တွေနဲ့ သူတို့ဝတ်စုံတွေကို ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Reed Richards ရဲ့ ၀တ်စုံက သူနဲ့လိုက်ပြီး ဆန့်ထွက်နိုင်တာဖြစ်သလို Sue ရဲ့ ၀တ်စုံကလည်း သူမကိုယ်ဖျောက်ရင် လိုက်ပျောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ Johnny ရဲ့ ၀တ်စုံကလည်း မီးမလောင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Fantastic Four အကြောင်းပြောရင် ချန်ထားလို့မရတဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက သူတို့ရဲ့ အဓိက ဗိလိန် Dr. Doom (Victor Von Doom), ဗီလိန်ကနေ မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတဲ့ Silver Surfer နဲ့ Negative Zone တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Dr.Doom အကြောင်းအရင်ပြောရရင် သူက Marvel Universe ထဲက စိတ်ကူးယဉ် တိုင်းပြည် Latveria ရဲ့ Dictator တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူက အရမ်းတော်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို၊ မှော်ဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့တိုင်းပြည်ကိုလည်း အရမ်းချစ်ပါတယ်။ သူက Fantastic Four သာမက Avengers နဲ့လည်း မကြာခဏ ထိပ်တိုက်တွေ့လေ့ရှိပါတယ်။
Negative Zone ဆိုတာကတော့ လက်ရှိ Fantastic Four (2015) ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Planet Zero အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး၊ ကာတွန်းထဲမှာ Reed Richards က ရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Negative Zone က Marvel Civil War ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Reed Richards နဲ့ Iron-Man တို့ နှစ်ယောက်က Negative Zone ထဲမှာ အကျဉ်းထောင် ဆောက်ထားပြီး သူတို့ကို ပုန်ကန်တဲ့ သူမှန်သမျှ ကို အဲ့ဒီမှာ ချုပ်ထားပါတယ်။
Silver Surfer ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါသလိုပဲ Galactus ရဲ့ ကင်းထောက်ဖြစ်ပြီး Galactus အတွက် ဂြိုလ်တွေကို လိုက်ရှာပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Galactus က Fantastic Four ရဲ့ အဓိက ဗီလိန် နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး God-Like creature တစ်ကောင်ဖြစ်ကာ ဂြိုလ်တွေကို စားသုံးပြီး စွမ်းအားရယူတာဖြစ်ပါတယ်။ Silver Surfer က ကမ္ဘာကိုရောက်ပြီး Fantastic Four အဖွဲ့နဲ့ တွေ့တဲ့နောက်မှာ ပေါင်းမိသွားပြီး Galactus ကို တွန်းလှန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိရုပ်ရှင်ကို Fantastic Four စာအုပ်နဲ့မတူဖူးလို့ ပြောနေကြတာ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ က Alternate version ဖြစ်တဲ့ Fantastic Four (Ultimate) ဇာတ်လမ်းကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွေမှာ အသက်ပိုငယ်တဲ့ Fantastic Four အဖွဲ့ကို သုံးထားပါတယ်။ Ultimate Story မှာ Reed ကို လူငယ်ဘ၀ထဲက အရမ်းတော်လို့ အစိုးရသ သူတို့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ခေါ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီမှာ Sue နဲ့ Johnny Storm တို့နဲ့စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူက ကလေးဘ၀ထဲက အရာဝတ္ထုလေးတွေကို Teleport လို့ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး အောင်မြင်အောင်လည်း ပို့နိုင်ပါတယ်။ သူက တစ်ဖက်ကိုရောက်အောင် ပို့နိုင်ပြီး ပြန်မခေါ်တတ်တာပဲ ရှိပါတယ်။ သူပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက Negative Zone ကိုရောက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Version မှာ Victor Von Doom က သူတော်တာ တတ်တာကို ကမ္ဘာက သိစေချင်တာဖြစ်သလို၊ Reed Richards နဲ့ပေါင်းပြီး Teleportation Technology ကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ Teleportation Device ပေါ်ပေါက်လာပြီး Negative Zone ကို သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Ultimate FF ရဲ့ Origin ပါ။ ဇာတ်လမ်းမှာက Teleportation Device ကို Quantum Gate လို့ခေါ်ခဲ့ပြီး Negative Zone ကို Planet Zero လို့ပြောင်းခေါ်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ FF ရဲ့ Origin ဖြစ်ပြီး ဒီလောက်ဆို သူတို့အကြောင်းကို အနည်းငယ်သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ အရင်တုန်းက ဇာတ်လမ်းလောက်မကောင်းသလို IMDb Rating 4.1 ရရှိထားတာကို
အောက်ပါလင့်တွင် တိုက်ရိုက်နှိပ်၍ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 10:13 PM No comments: Links to this post
တေးဆို ။ ။ Ywl Ywal
Posted by okkala net at 4:16 AM No comments: Links to this post
အယ်လ်တီရာဆိုတဲ့ လူသားနဲ့နတ်တို့ရဲ့ နယ်မြေကို သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံ
စည်လာတဲ့ မကောင်းဆိုးရွားတို့နဲ့ လူသားနဲ့နတ်တို့ကြားက တိုက်ပွဲ
လူသားနဲ့နတ်စစ်သည်တော်တွေ.. စုန်းကဝေတွေ ကြားအချင်းချင်း
နောက်ကွယ်က ကိုယ်စီကိုယ်စီ အကြံအစည်တွေနဲ့အတူရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားက သူတို့ဒီမကောင်းဆိုးရွားတွေနဲ့ နဂါးကြီးကိုရင်ဆိုင်သွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်
အိမ်နဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက်... ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးတွေနဲ့အတူဒီကားလေးဟာလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..။
Credit to mmsubstitle
ဗီဒီယို ဒေါင်းရန်(သို့) တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် လင်ခ် >
>>>> Download From pCloud (1G)
>>>> Download From pCloud (ဆိုဒ်သေး)
Posted by okkala net at 3:31 AM No comments: Links to this post
အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည် https://drive.google.com/file/d/0BxeyfPVoSd3qUXpMVTlHaG56eEk/view
ရေမီး အစုံ ( မြင့်မြတ် + စိုးမြတ်သူဇာ + ဒိန်းဒေါင် + မိုးပြည့်ပြည့်မောင် )
Posted by okkala net at 10:50 PM No comments: Links to this post
2015 August 25 က မှထွက်ရှိထားတဲ့ ပူပူနွေးနွေးအက်ရှင်ဇာတ်လမ်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်...
ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသူရော. ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါ Nadeem Soumah က တာဝန်ယူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်
ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..IMDb Rate မှာတော့4ခန့်သာ ရရှိထားပါသေးတယ်
Credit to CHANNELMYANMR
Posted by okkala net at 2:32 AM No comments: Links to this post
2015 ခု နှစ်ထဲမှာထွက်ရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..မြန်မာပြည်ကရုံတချို့မှ အခုတင်တုန်း
ရှိပါသေးတယ် မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ကြည့်လို့ရနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် :D
ကျောင်းမှာ ပြဇာတ်ပွဲလုပ်တာကစတာပါပဲ အဲဒီပြဇာတ်ကို အရင် စီနီယာတွေလုပ်ခဲ့တုန်းကလဲ လူသေမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီပြဇာတ်ကို အခုတခါပြန်ပီးပြသဖို့
ကျောင်းသားတွေပြင်ဆင်ကြတယ် ကောင်လေးက ကောင်မလေးကိုကြိတ်ကြိုက်နေတော့ သူ့ကိုဟီးရိုးလို့ထင်အောင် ညဘက်မှာ ပြဇာတ်စင်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ သူ့သူငယ်ချင်းက အကြံပေးရာကနေ
ညဘက်ကြီး ကျောင်းကိုသွားကြပါတယ် မထင်မှတ်ပဲ ကောင်မလေးပါရောက်လာပီး သူ့တို့အစီအစဉ်တွေ ပေါ်သွားပီး စိတ်ဆိုးသွားတယ် သူတို့ပြန်ထွက်ဖို့လုပ်ကော တံခါးတွေကဖွင့်မရတော့ပါဘူး ဒီလိုနဲ့တစ်ညလုံး ကျောင်းထဲမှာ ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
Posted by okkala net at 2:30 AM No comments: Links to this post
တေးဆို ။ ။ Thar Gyi
Posted by okkala net at 1:27 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 11:49 PM No comments: Links to this post
ပဲခူး သူလေးလို့ပြောတာပဲ ...သဘောပေါက်သူများ ကြည့်ချင်သူများ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲကြပါရန် ♥♥
Posted by okkala net at 11:24 PM No comments: Links to this post
စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Gandamar Wholesale မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Universe Myanmar 2015 & 2016 Top 20 Finalists များအား စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
Posted by okkala net at 11:04 PM No comments: Links to this post
အီဗာလီဟာ ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် တိုင်ကိုဆီမှာ အလုပ်လုပ်သလို သူနဲ့လည်း ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းမပျက်တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ တိုင်ကိုရဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို နှိမ်နင်းဖို့အတွက် ရဲဘက်ကို သတင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ သိရတဲ့နောက် မှာတော့ သူ့အဖွဲ့မှာ ရှိသမျှ တိုက်ခိုက်ရေး သမားတွေကို ကိုလွှတ်ပြီး အီဗာလီ ကို သတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တိုင်ကိုက သူ့လူတွေဟာ အီဗာလီကို နှိပ်စက်ပြီး လွယ်လွယ်နဲ့သတ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆခဲ့ပေမယ့် သူ့အထင်မှားသွားတယ်။
ဒိအခြေအနေတွေကို ကြိုမြင်ခဲ့တဲ့ အီဗာလီက ကြိုဝှက်ထားတဲ့ သေနတ်ကိုထုတ်ပြီး အားလုံးကို ခုခံနိုင်ခဲ့တယ်။
တိုင်ကိုက ဒီအဆောက်အအုံထဲက လူတွေ အားလုံးကို အီဗာလီကို သတ်ဖို့ ဆုငွေထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်..။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အီဗာလီက သူ့ မိခင်နဲ့ သမီးလေးဆီကို ဒီလူသတ်သမားတွေ ရောက်လာမှာစိုးရိမ်လို့ ဆက်သွယ်ပြီး ဒီအခြေအနေက ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားမလည်းဆုိုတာကိုတော့
credit to မြစ်ကြီးနား
Miss Universe မြန်မာ ရေကူးဝတ်စုံ အလှမယ်လေးများ ( Aza Aza !!! All The Best ♥♥)
Posted by okkala net at 5:25 AM No comments: Links to this post
Miss Myanmar International 2015 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ဖိုင်နယ်ပွဲ ည မှာ တေးသံရှင် အမွန်း ရဲ့ အလန်းစား ဖျော်ဖြေမှု
Posted by okkala net at 6:35 PM No comments: Links to this post
ချောကလက် ထောင်ချောက် ( နေတိုး + နန်းဆုဦး ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 6:25 PM No comments: Links to this post
2014 မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ ထိုင်းသရဲကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..3AM ထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ကားအပိုင်း 3ခုထဲက
တစ်ခုရဲ့ အဆက်အဖြစ် ဆက်လက်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..3AM ထဲမှာ အချိန်ပိုဆင်းတဲ့ ရည်းစား၂
ယောက်ကို သရဲအဖြစ်ခြောက်လှန့်ပြီးတော့ စနောက်တဲ့ သူ2ယောက်အကြောင့် ထွက်ပြေးသွားကြရတဲ့
ရည်းစား၂ဦးလုံး လှေကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသွားပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်..အဲ့ဇာတ်ကားကိုမှတ်မိကြမယ်
ထင်ပါတယ်..အခုဒီဇာတ်ကားရဲ့အစမှာလည်း ထိုဇာတ်ကားက အပိုင်းအစ လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြထား
ပေးပါတယ်..Ghost Over Time ဇာတ်ကားမှာတော့ အစအနောက်သန်တဲ့ လူတစ်စုနဲ့အတူ သရဲအယောင်ဆောင်တာတွေမှာ..တကယ့်သရဲအစစ်ပါလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ကြရမလဲဆိုတာ
Posted by okkala net at 8:51 PM No comments: Links to this post
စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Novotel Yangon Max Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရံပုံငွေ "နှင်းဆီနေ့သစ်" အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲ
နှင်းဆီနေ့သစ် အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲ VIDEO အား okkala အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားများ . Showe & အငြိမ့် Folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 7:14 PM No comments: Links to this post
2015 July 10 ရက်နေ့ကမှ ရုံတင်ထားတဲ့ စွန်းဝူခုန်း ကာတွန်းကားသစ်လေး......
၀င်ငွေအများဆုံး ၂၀၁၅ကာတွန်းအဖြစ်နဲ့ မှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အထူး Animation တွေနဲ့ မွန်းမံပြင်ဆင်ထားပြီး ယခင် စွန်းဝူခုန်းကားတွေနဲ့ တူညီခြင်းမရှိဘဲ ချစ်စဖွယ်ကောင်လေးငယ်တစ်ဦးကို ပါဝင်စေပြီး ရိုက်ကူးထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
၂၀၁၅ရဲ့ အကြည့်သင့်ဆုံးကာတွန်းကားဖြစ်ပြီး IMDb rating 7.8 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။
Credit to Myitkyina KNT Entertainment Group
Posted by okkala net at 9:33 AM No comments: Links to this post
Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကား Blu Ray Quality က အောက်တိုဘာမှထွက်မယ်တာရယ်...
သိပ်မကြည်ခင်မှာပဲ စာတန်းထိုးနဲ့ တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးကိုဒေါင်းပြီး TV နဲ့ ကြည့်ရင်တော့ သိပ်မဆိုးပါဘူး
IMF ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး တွမ်ခရုစ်ရဲ့ အပေါင်းအပါတို့အုပ်စုကို CIA ထဲသိမ်းသွင်းလိုက်ပြီးလှုပ်မရဖြစ်နေတဲ့အချိန် တွမ်ခရုစ် (အီသန်) ကိုတော့ စီအိုင်အေက မဖမ်းမိသေးပါဘူး။ အီသန်ဟာ အစွမ်းထက်တဲ့ စပိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ CIA က ကမ္ဘာအနှံ့ကွန်ရက်ဖြန့်ပြီး အီသန်ကို လိုက်ဖမ်းပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ အီသန်ဟာ IMF ရဲ့ နောက်ထပ် စစ်ဆင်ရေး (mission) ဟာ ဘာလဲသိရအောင် သတင်းသွားယူတဲ့အချိန်မှာပဲ ထောင်ချောက်ထဲဝင်မိပြီး အဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် CIA က ဖမ်းမိသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Syndicate က ထောင်ဖမ်းသွားတာပါ။
Syndicate ရဲ့ ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းကို အီသန်တစ်ယောက်ခံလိုက်ရပေမယ့် ဗြိတိသျှထောက်လှမ်းရေး၊ MI6 အေးဂျင့်တစ်ယောက်အကူအညီကြောင့် Syndicate အဖွဲ့ဆီကနေ လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ အဲဒိနောက် အီသန်ဟာ CIA လက်က လွတ်အောင်ပြေးရင်း တစ်ဖက်ကလည်း Syndicate အဖွဲ့ကို လက်ရဖမ်းမိနိုင်ဖို့ တစ်ကိုယ်တော်ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ Syndicate ဆိုတာ တကယ်ရှိကြောင်း လက်ဆုပ်လက်ကိုင်နဲ့ သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
IMBD Rating 8.1 ရှိတဲ့အက်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး Mission: Impossible ဖြစ်လို့ 
Posted by okkala net at 9:31 AM No comments: Links to this post
အလုံးစုံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသော ချစ်စရာ မြန်မာ Girls များ ♥♥♥
Posted by okkala net at 12:08 AM No comments: Links to this post